सांसदलाई ध`म्की` : प्रधानम`न्त्रीको पक्षमा हस्ता`क्षर नगरे जेपनि हुनसक्छ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Political Views/सांसदलाई ध`म्की` : प्रधानम`न्त्रीको पक्षमा हस्ता`क्षर नगरे जेपनि हुनसक्छ !
सांसदलाई ध`म्की` : प्रधानम`न्त्रीको पक्षमा हस्ता`क्षर नगरे जेपनि हुनसक्छ !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नलाग्ने सांसदहरुलाई ध`म्की आएको खुलासा भएको छ । अध्यादेश प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षले चलाइरहेको हस्ताक्षर अभियानमा सामेल नहुने सांसदहरुलाई ओलीका निकटस्थहरुले बालुवाटारबाटै धम्क्याएको खुलासा भएको हो । शुक्रबार मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्य शारदा भट्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आफूलाई भित्रिया बताउने गौरी ओलीले यस्तो ध`म्की` दिएकी हुन् ।
गौरीले ‘प्रधानमन्त्री`लाई भोलि निकाल्दै छन् यस्तो बेला बहाना`वाजी नगर्नुस् बालु`वाटार तुरुन्त आएर हस्ता`क्षर गर्नुस्’ भनेपछि भट्टले आफू यस्तो खेलमा नलाग्ने जवाफ दिएकी थिइन् । तर भट्टले यसो भन्नेबित्तिकै ओलीले ‘तपाईं प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिने ? धेरै बहानाबाजी नर्गनुस्, तुरुन्त बालुवाटार आएर हस्ताक्षर गर्नुस्’ ओलीको ध`म्की` उदृत गर्दै स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘नेपालमा जे पनि हुनसक्छ,तपाईं नराम्रोसँग फस्न सक्नुहुन्छ।’
भट्ट नेकपाकी सां`सद मात्र नभएर कैलालीकी पुरानो कार्यकर्ता समेत हुन् । उनी शुक्रबार एक कार्यक्रममा भइरहेका बेला यस्तो धम्कीयुक्त फोन आएको थियो । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको दुहाई दिने प्रधानमन्त्री र उनका नजिकका बाटै यस्तो हर्कत भएको थाहा पाएपछि सहभागीहरु आश्चर्यचकित बनेका थिए ।
यसविषयमा भट्टलाई रातोपाटीले सम्पर्क गर्दा आफूलाई बालुवाटारबाट बोलाइएको बताउँदै थप कुरा पछि खुल्दै जाने बताइन् । यता गौरीले भने सरकार अप्ठ्यारोमा परेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न भट्टलाई आफूले अनुरोध मात्र गरेको दावी गरिन् । उनले अनुरोधलाई धम्की भन्दै भट्टले नै अनावश्यक अफबाह फैलाएको समेत आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘तपाईँ सांसद हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नु तपाईँको दायित्व हो । मैले यति भनेकै हो ।’
नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रहेकी गौरी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै डोटी जिल्लाकी हुन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद छाड्न चर्को दवाव परेको छ। पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । ओलीले विवाद थामथुम पार्न विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिएपनि राजीनामा विषय भने साम्य भएको छ ।
स्रोत : रातोपाटि अनलाइन बाट